Enzym-yada dheef-shiidka: waxa loogu talagalay, halka laga helo iyo in ka badan! | Ragga Stylish
Waxay u badan tahay inaad maqashay wax ku saabsan enzymes dheefshiidka. Waana taas bulshada ayaa sii kordheysa xiisaha ay u qabto caafimaadkaaga dheefshiidka. Wax gebi ahaanba caadi ah, maadaama haddii ay jiraan xeelado lagu dhammeeyo dheef-shiidka liita, dadku waxay rabaan inay ogaadaan waxa ay yihiin.
Laakiin waa maxay enzymes-ka dheef-shiidka? Tan ugu sarreysana, marka loo eego muhiimaddooda, wax ma ka qaban karnaa sidii aan ku gaari lahayn? Ma su’aal nafaqo leh? Ka soo kabashada? Mise jirku iyaga keligood baa sameeya?
2 Cuntooyinka leh enzymes-ka dheefshiidka dabiiciga ah
3 Cuntada ceyriinka ah
Jidhku wuxuu ubaahanyahay enzymes kaladuwan si uu si sax ah ugu guto shaqooyinkiisa, oo ay ku jiraan kuwa ugu muhiimsan: dheef-shiidka cuntada. Xaaladdan oo kale waxay leeyihiin magacyo sida amylase, protease ama lipase. Enzymes-ka dheefshiidka ayaa inta badan lagu soo saaraa xammeetida. Laakiin kuwa laga helo caloosha, xiidmaha, ama candhuufta ayaa iyaguna door muhiim ah ka ciyaara dheef-shiidka.
Farogelintaada ayaa lagama maarmaan u ah burburinta karbohaydraytyada, istaarijka, borotiinnada iyo dufanka, sidaas awgeedna jidhku si sahal ah ayuu u nuugi karaa. Haddii jirkaaga uu joojiyo soo saarida enzyme-ka dheefshiidka qaarkood ama uusan awoodin inuu soo saaro wax ku filan, cawaaqibka ka dhalan kara waxaa weeye inaadan si fiican u liqi karin cuntada qaarkood.
Cuntooyinka leh enzymes-ka dheefshiidka dabiiciga ah
Sida muuqata ku darista cuntooyinka qaarkood waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta dheef-shiidka. Sababta ayaa ah inay ku jiraan enzymes dheef-shiid kiimikaad ah oo lagu dari doono kuwa jidhka laftiisu horeba u sameeyay si dabiici ah.
Mid ka mid ah cuntooyinka hodanka ku ah enzyme-ka waa cananaaska. Waxay kuxirantahay faa iidooyin caafimaad oo farabadan, mirahaan kuleylaha ah waxaa sidoo kale kujira enzme looyaqaano bromelain, kaas oo lalaxiriiriyay dheefshiidka borotiinka oofiican Waa in la ogaadaa in cananaaska uusan aheyn wadada kaliya ee lagu cuno enzyme-kan, maadaama inbadan laga heli karo suuqa dheeri ah bromelain.
Mango, dhinaceeda, waxay gacan ka geysan laheyd burburinta karbohaydraytyada iyada oo ay ugu wacan tahay maadada amylase. Hadday shaqeyso iyo haddii kale inay hagaajiso dheef-shiidka kaarbohaydraytyada (waxaa jira dad yiraahda waxay qabato iyo kuwo kale oo aan shaqeynin), waxa iska cad waa inaysan waxyeello u geysan isku dayga. Sidoo kale, had iyo jeer waa fikrad wanaagsan in miraha cusub lagu daro cuntada.
Laakiin cananaaska iyo cambe ma aha cuntooyinka kaliya ee ka caawin lahaa hagaajinta waxqabadka enzyme. Kuwa soo socdaa waa cuntooyinka kale ee cilmi baaristu muujiso waxaa ka buuxa enzymes dheefshiidka:
Cuntada ceyriinka ah
Dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin in raacitaanka cuntada cayriin - nooc ka mid ah cuntada khudradeed ee ujeedadeedu tahay in la cuno inta ugu badan ee cayriin ee suurtogalka ah - ay ka caawiso hagaajinta dheef-shiidka. Sababta ayaa ah in karinta ay hoos u dhigeyso enzymes-ka ku jira cuntooyinka qaarkood.
Sababtan la mid ah, enzymes-ka ayaa laga yaabaa inay shaqada u joojiyaan si sax ah marka uu kaco heer kulka jirka, sida marka aad qandho hayso, tusaale ahaan, ifilada. Laakiin ha ka welwelin: enzymes-kaaga ayaa soo kabanaya marka qandhadu yaraato oo jidhku ku soo noqdo heerkulka caadiga ah.
Istaraatiijiyad kale oo badanaa la raaco si loo kordhiyo xaddiga enzymes-ka jirka loona yareeyo dhibaatooyinka dheefshiidka qaarkood waa qaadataa dheeri ah enzyme dheefshiidka. Noocyada kaabayaasha ah ayaa sidoo kale lagu tiriyaa faa'iidooyinka kale ee caafimaadka.
Sida dhammaan wixii dheeri ah, Waa fikrad fiican inaad la tashato dhakhtar ka hor intaadan bilaabin inaad qaadato waxyaalo dheeri ah oo leh enzymes dheefshiidka. si loo ogaado haddii ay jiraan wax qatar ah ama dhibaatooyin kiiskaaga ah.
Dhakhaatiirtu waxay sidoo kale ku dari karaan waxyaabo dheeri ah oo leh enzymes dheef-shiid kiimikaad ah oo lagu daaweynayo bukaannada qaba cudurrada farageliya wax soo saarka caadiga ah ee kuwan., oo ay ku jiraan beeryarada. Ujeeddada ayaa ah in la siiyo enzymes-ka jirka si bukaanku uusan u lumin awoodda muhiimka ah ee uu ku nuugo nafaqooyinka cuntada.
Waa muhiim inaad ogaatid taas waxaa jira dad xaqiijinaya in aan loo baahnayn in la qaato wax lagu shiidi karo. Marka loo eego aragtidan, waxaa jira caddayn aan ku filnayn oo ah in la qaato raashin cayriin ah ama qaadashada nafaqo ay ka shaqeyso soo saarista nooc kasta oo isbeddel ah ee enzymes. Waxa jira xirfadlayaal caafimaad oo badan oo ku doodaya in, haddii qofku caafimaad qabo, habka dheef-shiidka uu haddaba masuul ka yahay soo saarista enzymes-ka loo baahan yahay ee dheef-shiidka.
Waxay ka digayaan in haddii aad leedahay dareen ah in wax uun aan si fiican uga shaqeyneynin habka dheef-shiidkaaga, ay ugu wanaagsan tahay inaad ballan la sameysid dhakhtarkaaga si uu u sameeyo baaris halkii aad isku dayi lahayd inaad dhibaatada ku xalliso adoo qaadanaya enzymes dheefshiidka iyo alaabada kale. Taasna xusuusnow dhibaatooyinka dheef-shiidka ee joogtada ah waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay ku xadgudubka cuntada la warshadeeyay. Xaaladaha qaarkood sababtu waa dulqaad la'aanta laaktooska ama horumarinta cudur (sida cudurada baruurta ama gaastariya), daaweyntiisu ay tahay mid lama huraan ah oo ku dhacda gacanta xirfadlayaasha caafimaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Enzymes-ka dheefshiidka